အသက် ၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျရောက်လာတဲ့ အဆိုတော် လွှမ်းပိုင် – PannPwint
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်ကတော့ ခုဆိုရင် အသက် ၂၉ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ကျရောက်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မက်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြည့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာလည်း Birthday ရောက်ရှိ။
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးပါဗျို့ ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အချို့က ထိပ်တန်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်တစ်ယောက် ခုနောက်ပိုင်းတော့ အဆိုတော်တွေရဲ့ အတက်အကျထုံးစံအတိုင်း လောကဓံခံစားနေရပုံပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာ သူ့အတွက် မကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေထားပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း ဝေဖန်မှုတွေကြုံခဲ့ရသလို သူဝတ်နေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကိုလည်း ဝေဖန်တဲ့သူတွေ အမြဲရှိနေတာကြောင့် လွှမ်းပိုင်တစ်ယောက် အနေအနေ ကျပ်တည်းမှုတွေလည်း ခံစားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဒုလ္လဘ သုံးရက်လည်း ဝတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ လှမျးပိုငျကတော့ ခုဆိုရငျ အသကျ ၂၉ နှဈပွညျ့မှေးနေ့ ကရြောကျလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့ မကျလ ၁ ရကျနမှေ့ာ ပွညျ့သှားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကို သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာလညျး Birthday ရောကျရှိ။
မှေးနဆေု့တောငျးပေးပါဗြို့ ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအခြို့က ထိပျတနျးက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အဆိုတျောလှမျးပိုငျတဈယောကျ ခုနောကျပိုငျးတော့ အဆိုတျောတှရေဲ့ အတကျအကထြုံးစံအတိုငျး လောကဓံခံစားနရေပုံပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈဟာ သူ့အတှကျ မကောငျးတဲ့နှဈတဈနှဈဖွဈတယျလို့လညျး သူ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဖွထေားပါတယျ။
ဖကျရှငျဆိုငျဖှငျ့တဲ့အခါမှာလညျး ဝဖေနျမှုတှကွေုံခဲ့ရသလို သူဝတျနတေဲ့ ဖကျရှငျတှကေိုလညျး ဝဖေနျတဲ့သူတှေ အမွဲရှိနတောကွောငျ့ လှမျးပိုငျတဈယောကျ အနအေနေ ကပျြတညျးမှုတှလေညျး ခံစားခဲ့ရပွီး နောကျဆုံး ဒုလ်လဘ သုံးရကျလညျး ဝတျခဲ့ပါသေးတယျ။
အမြန်လမ်း မိုင် ၁၁ဝ မှာ ဘုရားထီးတင်မယ့် သရုပ်ဆောင် ဖူးစုံ
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဖူးစံက ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၁ဝ မှာ ဘုရားထီးတင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်တဲ့ ဖူးစုံက ပရိတ်သတ်တွေ မျက်စိအောက်က ပျောက်သလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုလောလောဆယ် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှင်းဆီအငြိမ့်မှာလည်း ပင်တိုင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ကနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ဘဝမှာ ဂျင်းထည်တွေအရမ်းစိုးမိုးလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ မေပန်းချီ
အရမ်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိတ်ကိတ်လေးနဲ့ မေပန်းချီက ဂျင်းထည်လေးတွေကို အရမ်းနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်တဲ့…. သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးပုံစံ၊ မျက်နှာထားတို့ကလည်း ဂျင်းထည်လေးတွေဝတ်လိုက်တာနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေးအသွင်နဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်လို့ဖြစ်မယ်နေ်ာ… အရမ်းလှတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဂျင်းဖက်ရှင်ကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်…. ဓါတ်ပုံ – မေပန်းချီ FB Credit : Duwun
အဆိုတော်ခိုင်ထူး ဝဋ်ကျွတ်သွားတာ လို့ပြောလိုက်တဲ့ မေခလာ
သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ပါရမီ ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့သော အဆိုတော် ခိုင်ထူးတွင် ဆိုင်းလင်းထူး ဟုခေါ်သော သားတစ်ယောက် ရှိခဲ့သည်။ ခိုင်ထူးကွယ်လွန်ပြီး သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသော ခိုင်ထူးအတွက် ရည်းစူးကုသိုလ်ပြုရန် အလှူတစ်ဦးက ငွေလှူသည့် ဓာတ်ပုံများကို မေခလာက …